Hos Annika | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Yitya usele » e » Hos Annika
Ukutya okuphekwe kakuhle ikakhulu kwizithako zaseSweden. Indawo yokutyela inokubhukishwa ngamaqela abucala, kunokwenzeka ukuba ufumane ukutya. UAnnika unomdla omkhulu kumculo oza kuvakala kwindawo yokutyela kwixa elizayo. Wamkelekile ngokufudumeleyo ukonwabela ukutya kunye nomculo!
Umzi mveliso 3, 577 39 IHultfred, Sverige
11 uphononongo kuGoogle
Sasijongise emantla saya eHultsfred xa ilixesha lesidlo sasemini. Sifumene le gem encinci kwaye satya isidlo sasemini esimnandi (i-ayisikhrim okanye isityu senyama). Ngaphezulu koko, ulwamkelo oluhle ngobuhlobo. Udibaniso olongezelelekileyo lwendlu yangasese entle enamakhandlela akhanyisiweyo kunye neetawuli ezincinci zeterry.
5/5 4 kwiinyanga ezidlulileyo
Abantu endandisebenza nabo sasilambele iqhekeza lokutya. Sagqiba kwelokuba siyotyela eHos Annika. Ukufika kwethu apho samkelwa ngobubele nguAnnika. Siye sahlala etafileni ebekiwe nelaphu letafile namakhandlela. UAnnika wema ngasekupheleni kwetafile wanika ukutya. Sifumene iherring eyenziwe ekhaya, iitapile kunye nesaladi yokuqalisa kunye nesityu senkukhu kunye nerayisi yikhosi ephambili. Yonke into yayintle kakhulu.
Kufuneka ube neendlela ezidlulileyo! Ukutya okumnandi kakhulu, igumbi elihle kunye nenkonzo ebalaseleyo. Ngokuqinisekileyo siza kuza apha kwakhona!
Ukuba udlule kwiindlela kwaye ulambile, akufuneki uphoswe zii-Annika. Ukutya okumnandi kakhulu, ukwamkelwa okuhle kwaye ucocekile kwaye ucocekile.
Ukutya okumnandi kunye nendawo entle.